Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Trinidad sy Tobago » Ny Caribbean Airlines izao dia eo amin'ny taha-karama
Caribbean Airlines dia nitatitra ny famintinana ny valiny ara-bola tsy voatanisa, nandritra ny sivy volana nifarana tamin'ny 30 septambra 2018, izay mampiseho fa ny sidina dia niasa ho tombom-barotra ary manana fidiram-bola tsara ho an'ny taona.
Ny kaonty tsy voamarina nandritra ny sivy volana ka hatramin'ny 30 septambra 2018 dia mampiseho ny vola miditra alohan'ny tombony sy ny hetra (EBIT) mitentina TT $ 96m - dia misy TT $ 118m amin'ny asa iraisampirenena sy hafa ary TT $ 22m ratsy eo amin'ny tetezana an-trano.
Ny totalin'ny vola azon'ny zotram-piaramanidina TT $ 48m dia misy TT $ 83m amin'ny asa iraisam-pirenena sy hafa ary fahaverezan'ny TT $ 35 tapitrisa eo amin'ny tetezana.
Ny vola miditra isan-taona dia nampiseho fanatsarana 15% isan-taona amin'ny TT $ 291M. Ny solika TT $ 450.4M dia fandaniana lehibe tamin'io fe-potoana io ihany, raha oharina amin'ny TT $ 345.5M tamin'ny 2017 ka nahatonga fiakarana TT $ 104.9M isan-taona.
Ny fanatsarana ny zava-bitan'ny Caribbean Airlines dia tratra na eo aza ny fatiantoka etsy ambony amin'ny tetezana an'habakabaka izay mitranga hatrany. Hatramin'ny 2005, ny saran-dalan'ny olon-dehibe amin'ny tetezana amin'ny rivotra dia napetraka amin'ny $ 150 indray mandeha, na inona na inona fiakaran'ny vidin-tsolika, izay tsy nahazo fanampiana ara-bola ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Ny saran-dalan'ny breakeven eny amin'ny tetezana amin'ny rivotra dia 300 $ amin'ny lalana iray. Amin'io vola io dia mandoa $ 150 ny mpandeha amin'izao fotoana izao, ny fanampiana ho an'ny mpandeha ho an'ny olon-dehibe dia $ 50 fotsiny (ny ankizy tsy mahazo fanampiana avy amin'ny Governemanta) ary ny Caribbean Airlines dia mandray ny fatiantoka ho an'ny $ 100 na $ 150 ambiny miankina amin'ny raha zaza ny mpandeha fa fibodoana seza.
Mikasika ny fanatsarana ny zava-bita, Andriamatoa S. Ronnie Mohammed, filoha, Caribbean Airlines, dia nilaza hoe: "Ity dia zava-bita miavaka ho an'ny Caribbean Airlines, indrindra manoloana ny fihenan'ny vidin-tsolika avo kokoa sy ny fanohananay ny asa eto an-toerana. Heverinay ho vaovao tsara ho an'ny Faritra Karaiba izany, tarihin'ny haavo matihanin'ny ekipa, matihanina ary mifantoka amin'ny mpanjifa ”; ary
Andriamatoa Garvin Medera, Chief Executive Executive, Caribbean Airlines dia nanampy hoe: “Ity fahombiazana ity dia fijoroana ho vavolombelona amin'ny fanoloran-tenan'ny mpiasa sy ny tsy fivadihan'ny mpanjifanay izay manohana anay manerana ny tambajotra. Mbola betsaka ny zavatra tokony hatao hananganana ity fototra ity, indrindra rehefa miditra amin'ny fotoan-tsarotra lalovan'ny taona isika. ”
Fanamarihana hafa amin'ny fe-potoana Janoary ka hatramin'ny Septambra 2018:
Fanatsarana ny karama sy ny fidiram-bola ary ny tombom-barotra
Fampitomboana ny isan'ny mpandeha sy ny enta-mavesatra amin'ny zotra lehibe maro
Nanangana vokatra, fiasa ary serivisy vaovao, ao anatin'izany ny: Caribbean View, Caribbean Upgrade, Caribbean Plus, Caribbean Explorer, fanavotana Caribbean Miles an-tserasera, Webchat amin'ny Internet, WhatsApp Chat ary Caribbean Café.
Nampahafantatra serivisy vaovao avy any Port of Spain ka hatrany Kiobà ary avy any St.Vincent ka hatrany New York
Tranonkala Cargo Vaovao novolavolaina
Fandraisana tapakila iraisana miaraka amin'ny Hainan Airlines
Fampandrenesana fifandraisana an-tserasera nampahafantarina miaraka amin'ireo mpiara-miasa isam-paritra telo
Caribbean Airlines dia nitana ny laharana faha-25 amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka 164 manerantany ho an'ny volana septambra 2018, ho an'ny fampisehoana ara-potoana ataon'ny OAG (Guide of Aviation Ofisialy) Star Ranking.
Voafidy ho mpandresy amin'ny 'Airline mitarika any Karaiba' ho an'ny taona fahavalo nisesy ary voafantina ihany koa ho 'Marika fiaramanidina malaza any Karaiba 2018'
Fahombiazan'ny Air-Bridge: Ny sidina feno dia miasa: 11,372 805,233; Fipetrahana tanteraka: 716,299 sy mpandeha tanteraka nitondra: XNUMX
Misaotra am-pahatsorana ireo mpanjifa sy mpiara-miombon'antoka aminy tamim-pitiavana sy manohana azy ireo hatrany ny Caribbean Airlines.
Sarasota! Tsy Saratoga
Mivory ny mpandray anjara fizahan-tany amin'ny Fihaonambe Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany eran-tany amin'ny taona 2018